Dowladda Soomaaliya oo garoonka Aadan Cadde ku gubtay jaad laga keenay Itoobiya | Xaysimo
Home War Dowladda Soomaaliya oo garoonka Aadan Cadde ku gubtay jaad laga keenay Itoobiya
Dowladda Soomaaliya oo garoonka Aadan Cadde ku gubtay jaad laga keenay Itoobiya
Ciidamada Ammaanka Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde International ayaa qabtay qaad si qaldan loo soo gelin rabay Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Wasaaradda Gaadiidka Xukuumadda Soomaaliya ayaa amartay in la gubo qaadka la isku dayey in sifo sharci darro ah loo soo geliyo Muqdisho sida uu warbaahinta u xaqiijiyey Wasiirka Gadiidka Dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Salaad Oomaar.
Wasiirka ayaa xusay in jaadkaan la isku dayey in lagu soo dhex qariyo Fasixii dulimaadka labada maalin ahaa ee loo sameeyey muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xanibnaa qaar kamid ah garoomada Caalamka.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa Magaalada Muqdisho soo gaarayey Qaad lagu soo daabulay duumo, waxaana lagu kala iibsanayey qiimo aad u sareeyo, waxaana meelaha qaar halkii marduuf lagu kala iibsanayaa 200-300 Dollar halka markii hore lagu kala iibsan jiray 20 Dollar.
Ganacstada qaadka soo dajisato ayaa isku dayey inay ka faa’idestaan fursadda labada maalin oo ay Dowladda Soomaaliya fasaxday duulimaadyada caalamiga, waxayna qaadka kusoo dhex qarinayey buursooyinka iyo Jeegaga lagu soo qaato hilibka oodkaca.
Qeybo badan oo kamid ah Soomaaliya ayaa qaadka lagu geeyaa gawaarida Xamuulka oo kasoo tallaabayo xuduudaha dowladaha Kenya iyo Itoobiya, taasoo hareer marsan amarkii Dowladda Soomaaliya ee ahaa inaan lasoo geli karin xuduudaha muddo 18 Maalin ah.